Waa Tan Sababta Mars Loogu Bixiyey “Gaduudow” | Xaqiiqonews
Waa Tan Sababta Mars Loogu Bixiyey “Gaduudow”
Meeraha Mars had iyo jeer waxaa kale oo loogu yeeraa “meeraha gaduudan”, laakiin dad badan isma weydiiyaan sababta magacan loo siiyey Mars
Maalmo ka hor hay’adda xiddigiska Mareykanka u qaabilsan ee lagu magacaabo “NASA”, ayaa Mars dul geysay markab-xiddigeedka casriga ah ee “”Perseverance”, kaasi oo sida magaciisa ka muuqata soo gudbinaya waxyaabaha ay adagtahay in laga ogaado Mars.
Ilaa hadda saynisyahanada waxa ay ogyihiin oo kaliya in midabka gaduudan ee Mars sababteedu ay leedahay maadada birta oksijiinta leh (Iron oxide) ee kowkabkani ka sameysan yahay, laakiin lama oga sida arintani ku dhacday.
Sidoo kale Aqri: NASA Oo Damacsan In Ay Ban’aadam Geyso Mars Safar Seddex Bil Ah
Qiyaasyada cilmiyeysan ayaa sheegay in Mars da’diisu tahay 4.5 Bilyan oo sano, waxaana la leeyahay xilligaasi ayey sameysmatay qaabka ay u ektahay oogada Mars.
Saynisyahanada waxa ay aaminsanyihiin in meeraha aynu ku noolnahay ee dhulka uu birtiisu ku helay soo jiidasho, madaama uu leeyahay awoodda “cuf-isjiidka”, laakiin Mars sheekadiisu gabi ahaanba wey ka duwan tahay.
Waxaa kale oo la ogyahay in maadada birta midibkeedu aysan aheyn “gaduud”, laakiin waxaa lagu tafsiirinayaa in midibka gaduudan ay keentay falkalka Birta ay la sameysay oksijiinta.
Xilli saynisyahanada ay aad ugu xamasadeysanyihiin in wax badan laga ogaado noolasha Mars, su’aasha ah “Mars maxaa gaduudiyey” jawaabteeda waa mid lala sugaayo cilmi baarisyada mustaqbalka ee aan ka dhursugeyno inteena warka jecel.
Maalintii isniinta ee la soo dhaafay inijineerada “NASA”, ayaa baahiyey muuqaalkii ugu horeeyey oo cod leh oo laga soo duubay Mars, iyaga oo codkaasi yar ku sheegay in uu ahaa “guuxa dabeysha Mars”.